Accueil > Gazetin'ny nosy > Manatombo ny mpanohana an-dRajoelina
Manatombo ny mpanohana an-dRajoelina
Fa efa miresaka an’izay fifidianana depiote izay ihany isika, ka ny akon’ny fanadihadiana nataon’ny mpanao gazety tany an-toerana dia mbola isongadinan’ny mpanohana an-dRajoelina sy ny fitondrana ankehitriny. Manana tombon-dahiny amin’izao fifidianana depiote izao izany ny atolotry ny vondron-kery manohana ny fitondrana, dia ny atolotry ny “Ird”, izay tsy hafa fa solombavambahoaka teo aloha, Depiote Lova.
Vondron-kery tsy azo hamaivanina ao amin’ny Faritar Alaotra Mangoro amin’ny ankapobeny ary ao Moramanga manokana koa ny “IFi” izay vovonan’ireo fikambanana marobe niara-nanohana ny filoha Rajoelina tamin’ny fifidianana filohampirenena teo.
Nidina tany an-toerana mihitsy moa ny sabotsy teo ny filohan’ny “IFI” ao anatin’ny faritanin’i Toamasina, Alain Ralainarivo Baba, notronin’ny filohan’ny “IFI” ao amin’ny faritra Alaotra Mangoro, Andriatsimiova Zo, sy ny filohan’ny “IFI” ao Moramanga, Rafalimanda Andrianjafy ary ny filohan’ny “IFI” avy any Amparafaravola, Rabezanahary Mahefa.
Tonga marobe tao amin’ny fihaonan’ny “IFI” Alaotra Mangoro tao Moramanga ny faran’ny herinandro teo ny mpitarika ireo fikambanana marobe miara-dia ao anatin’ny “IFI”. Nanentana azy ireo mba hanao izay fomba rehetra hiarovana ny vokatry ny tolona sy ny fifidianana farany teo ka nahalany ny Filoha Rajoelina, mba hiantohana ny fahamarinan-toerana politikan’ny fitondrana ny filohan’ny “IFI” Faritanin’i Toamasina, Alain Ralainarivo Baba.
Isan’ny misongadina “Rakoto Grenà”
Fa tamin’ny fanadihadiana nataon’ny mpanao gazety tamin’ny kaomina sasantsasany tany an-toerana koa no nahatsapana fa ny kandida mahaleotena hofidiana depiote ao Moramanga, Rakoto Grenà, izay mpandraharaha dia marobe no mankasitraka azy. Isan’ny manohana ny fitondrana tarihin’ny filoha Rajoelina koa izy. Maro ny olona no mankasitraka azy amin’izao fifidianana izao satria hoe “efa ela izy no nifanosona tamin’ny vahoakan’i Moramanga, ary mpanao asa soa ho an’ny mponina”. Mahafantatra tsara ny ny fahasahiranan’ny vahoakan’i Moramanga izy, hoy ny akon’ny fanadihadiana, ary azon’ny mponina any antoka fa itokisana amin’izay ho fitondrana ny hetahetan’i Moramanga any amin’ny fitondrana foibe.